हामी एमालेसँग मिल्दैनौं, माओवादीलाई पुर्नगठन गछौं’::Pathivara News
काठमाडाैं । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको तत्कालिन माओवादी अहिले विभिन्न चोइटामा विभाजित छ । मोहन वैद्य कान्तिकारी माओवादीका नाममा अझै सशस्त्र सघर्ष आवश्यक छ भनेर एउटा अभियानमा छन् । नेत्रविक्रम चन्द छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर बसेका छन् । यता जनयुद्ध हाकेका पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बनिरहँदा बाबुराम भट्टराइले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्नुभएको छ ।
यो अवस्थामा माओवादी केन्द्र एमालेसँगको पार्टी एकिरणमा जुटेको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकताको गृहकार्य हुदैगर्दा केहि असन्तृष्टी प्रकट हुन थालेका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिले भइरहेका गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किँरातीले कसरी हेरेका छन् । पाथिभरा न्युज बहसमा नेता किरातीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
तपाई पार्टीले हिजो लिएको विचार नछोडौं भनिराख्नु भएको छ । तर पार्टीको नेतृत्व अर्काे बाटो तिर जार्दैछ, के भन्नुहुन्छ ?
नेतृत्व कता जार्दैछ त्यो सबैलाई थाहा छ, तर पनि मैले आफ्नो सघर्ष जारी राखेको छु ।
तपाईलाई नै पार्टीको घेराबाट बाहिर पठाइदिने, गोपाल किँरातीलाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र लेख्ने जस्ता गतिविधि पनि भए नी यो बीचमा ?
पार्टी भित्र राखगरी मेरो विचारलाई सहन सक्दैनन् र निस्तेज पार्नका निम्ती त्यो हर्कत गर्न पुगेका मैले सुनेको छु । खासगरी यो माओवाद र पहिचानको मुद्धालाई दबाउने नियतका साथ केहि साथीहरुले हकृत गरे त्यो फेरी मुख्य विषय होइन । हाम्रो माओवादी केन्द्रमा त्यस्तो आउँनलाई त्यती अन्यथा मान्न परेन ।
होइन माओवादी हिजोका विचारबाट बिचलीत हुनु हुदैन भन्नेलाई नै पार्टीको घेरा बाहिर निकाल्ने प्रपञ्च रचिन थालेपछि यो त चिन्ताको विषय भयो नी ?
२०६३ सालमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौं त्यहाँ देखि आजसम्म यो ११ वर्षको अवधीमा एउटा पनि माक्र्सवाद स्कुलिङ गराइएन, र माक्र्सवाद स्कुलिङ नगराइएको परिणाम त यस्तै हुन्छ ।
मैले अहिले विचार गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले नै यस्तो गर्नुभयो जस्तो लाग्दैछ, जस्तो कि २०६३ सालमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौं त्यहाँ देखि आजसम्म यो ११ वर्षको अवधीमा एउटा पनि माक्र्सवाद स्कुलिङ गराइएन, र माक्र्सवाद स्कुलिङ नगराइएको परिणाम त यस्तै हुन्छ । जो उहाँले चाहनु भएको थियो अर्थात एमाले र त्यो एमालेको चिन्तन प्रवृतीले त हामीलाई सर्वाहारावादीलाई लखेट्नु पर्छ भन्ने नै भयो ।
तपाईको भनाईमा अहिलेको विकृती, जनवादलाई नमान्ने गतिविधि भईरहेको छ यो सबैको कारक चाँही अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो ?
अब अध्यक्ष कै नेतृत्वमा हामी काम गर्दै आइरहेका छाैं, उहाँ मातहतका पनि धेरै साथीहरु हेलान् जो उहाँका गतिविधि रुचाउदैनन् । मुढेबलले कम्युनिस्ट बनाउने भन्छन् अब त्यो मुढेबलले कम्युनिस्ट भइदैन ।
तपाई अब अलग हुदै हो ?
हामी अलग यसकारण हुदैछौं कि, अध्यक्ष प्रचण्डहरु चाँही एमालेमा विलयमा जानु हुन्छ । हामी जादैनौं र माओवादी केन्द्रलाई पुर्नगठन गछौं, र त्यसैको निम्ती अहिले चिन्तन मनन्को तयारी गरिरहेका छौं ।
म एमालेमा विलय हुन जाने होइन पनि भन्नुहुन्छ, पार्टीको जिम्मेवारी पनि पूरा गरिराख्नुभएको छ । किन यस्तो मोह देखाएको ?
यो गोपाल किराती चाँही निस्केर, विभाजित भएर, फुटेर जाने होइन । अरुले छोडेर जान्छन् त्यो छोडेर गएको माओवादी केन्द्र सम्हाल्ने हो ।
तरिका अलिकति फरक छ, यो भन्दा पहिलाले विचार सघर्ष गर्दाखेरी उहाँहरु निस्केर जानु भो, अब यो गोपाल किराती चाँही निस्केर, विभाजित भएर, फुटेर जाने होइन । अरुले छोडेर जान्छन् त्यो छोडेर गएको माओवादी केन्द्र सम्हाल्ने हो, त्यसको लागि म सघर्षमा छु ।
तर यो कुरा त मातृका यादवले भन्नुभएको थियो, माओवादीको मुलधार म रहे भनेर । अहिले मातृका यादवको हविगत के छ ?
राजनीतिक रुपले मातृका जीले गल्ती गर्नुभएको थियो, ५७ सालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्णय गर्ने बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तत्कालिन माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा तर संविधान सभाबाट निर्माण कार्य छोडेर जानुभयो । वैद्य, बादलहरुले पनि त्यह गल्ती गरिरहेका छन् । त्यसो हुनाले उहाँहरुले गल्ती गर्नुभयो, म त के गल्ती गर्दैछु भन्ने प्रश्न छ, त्यसकारण मेरो गल्ती छैन ।
उसो अब तपाई एमालेसँगको पार्टी एकिकरण पछाडी त्यो पार्टीमा जानु हुन्न ?
त्यसमा जादैन, किन भने माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादको सिद्धान्त जब पदप्रदर्शक सिद्धान्तमा रहदैन, त्यो पार्टीमा काम गर्न सकिदैन । मैले यती भन्दिऊ –कि मेरो दिमागले काम गर्दैन ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीले जनयुद्धका सिद्धान्तहरु स्वीकार गरीसक्नु भयो रे नी त, तपाईकै अध्यक्षले हिजो पेरिसडाँडामा बोल्नुभयो ?
माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको कस्तो हुने भन्ने हो । तसर्थ संसदवादीहरु एकतामा जानुहुन्छ, हामी गणतन्त्रवादीहरु चाँही जादैनौं ।
होइन त्यो त अब प्रचण्डले बोल्नुभयो होला । केपी ओलीले बोलेको सुनेको छैन । हिजो केपी ओली पेरिसडाँडा आउने भनेको सुनेर नै म किरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गए । त्यसकारण ओलीले होइन ओलीको वारेसनामा प्रचण्ड भएर त पत्याउने कुरो भएन । जनयद्धको मुल्याङकनमा एउटा प्रश्न रह्यो, अर्काे चाँहि माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको कस्तो हुने भन्ने हो । तसर्थ संसदवादीहरु एकतामा जानुहुन्छ, हामी गणतन्त्रवादीहरु चाँही जादैनौं ।
कम्युनिस्टहरु अरुलाई गाली गर्न पनि आँखा चिम्लिएर गर्छन र मिल्न पनि भनिन्छ नी ?
त्यस्तै हुदै आएको छ, तर मान्छेले आफ्नो विचारले काम गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो विचारमा मेरो धेरै छैन माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवादको चाँही पदप्रदर्शकको सिद्धान्त, पहिचानको मुद्धा र समाजवादी कान्तिलाई कार्यनीतिमा ल्याउनुपर्छ हो ।
अब हामी खोल्छौँ ‘असली’ कम्युनिस्ट पार्टी